ပုဂ္ဂလိကဂျက် Air ကိုပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှုကျောက်ချစခန်း, ငါ့ကိုအနီး AK လေယာဉ်လေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်း
အလုပ်အမှုဆောင်ပုဂ္ဂလိကဂျက် Air ကိုပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှုကျောက်ချစခန်း, alaska အကောင်းဆုံးလေယာဉ်လေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီဝန်ဆောင်မှုခေါ်ဆိုမှု 888-200-3292 အာကာသဗလာခြေထောက်ခရီးသွားစာချုပ်များအတွက်. သငျသညျကျောက်ချစခန်းမှအဆင်ပြေလေကြောင်းခရီးသွားချင်သည့်အခါတစ်ဦးကစင်းလုံးငှားပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ဟာအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းဖြစ်ပါသည်, alaska.
သငျသညျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်သို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဧရိယာသွားရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှိမရှိ, တစ်ဦးစင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုသင်လျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့ဦးတည်ရာကိုရောက်ရှိကူညီပေးသည်, စတိုင်နှင့်အချိန်ပေါ်. ကျောက်ချစခန်းလေယာဉ်ကွင်းနှင့်ထံမှပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ပျံသန်းမဆိုအမျိုးအစားများအတွက်လက်ငင်းကိုးကား Get. ငါတို့သည်ဤစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အတွေ့အကြုံ၏နှစ်ပေါင်းရှိသည်နှင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ထိပ်တန်းအရည်အသွေးမြင့်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပူဇော်. ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်သည်လေထုစင်းလုံးငှားကျောက်ချစခန်း Alaska လေယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ယခုကျွန်တော်တို့ကို Call.
တစ်ချက်ချင်းကိုးကားရဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းကိုးကား tool ကိုသုံးပါ. ကိုယ့်ခရီးသည်အရေအတွက်ကများကဲ့သို့လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကို, နေ့စှဲ, အချိန်, မူလအစတည်နေရာ, ခရီးလမ်းဆုံး, ဘတ်ဂျက်, လေယာဉ်ပျံအမျိုးအစား, နှင့်တလမ်းတည်းဖြင့်သို့မဟုတ်အသွားအပြန်. ထွက်ခွာနှင့်ဆိုက်ရောက်နေရာများပေါ်တွင်သတင်းအချက်အလက်ပေးတဲ့အခါသင်ရိုးရှင်းစွာလေဆိပ်သို့မဟုတ်မြို့အမည်များပေးနိုင်ပါသည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်တစ်ဦးအလွန်တိုတောင်းသောအသိပေးစာမှာဇိမ်ခံပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စီစဉ်နိုင်ပါတယ်. သငျသညျတစ်နာရီရဲ့အသိပေးစာသင်၏အထဲမှာသတ်မှတ်ထားသောလေယာဉ်တင်ရနိုငျ. သငျသညျကျောက်ချစခန်း Alaska ရှိငှားပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်မည်သည့်အထူးတောင်းဆိုချက်အရရှိပါက, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီအရာအားလုံးပြုလိမ့်မည်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုနှုန်းအဖြစ်စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းချက်ပူဇော်. သင်သုံးတဲ့န်ဆောင်မှုများသာပေးဆောင်.
သင်တစ်ဦးပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ထဲမှာသော်လည်းအလွန်အမင်းလျှော့ကုန်ကျစရိတ်မှာခရီးသွားလာချင်ပါနဲ့? သငျသညျရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင် "ငါ့ကိုကျောက်ချစခန်း Alaska အနီးနောက်ဆုံးမိနစ်ဗလာခြေထောက်လေယာဉ်တင်စာချုပ်", ထို့နောက်သင်သည်လက်ျာအရပ်မှလာကြပြီ. ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ပိုင်ရှင်အော်ပရေတာကနေရရှိနိုင်ထိုကဲ့သို့သောအပေးအယူကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းကို update. ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောဂျက်အော်ပရေတာမှချက်ချင်းကိုသင်ဆက်သွယ်နိုင်သည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဗလာခြေထောက် updates များကိုအမှန်တကယ်အချိန်အတွက်စာရင်းသွင်းထားပါသည်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ပင်တိုတောင်းသောအသိပေးစာမှာတောင်းဆိုမှုများကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုငျ. တစ်ဦးအချည်းနှီးသောခြေထောက်သဘောတူညီချက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေး, အရေးပေါ်အခြေအနေ, အပျော်အပါးသို့မဟုတ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖော်ရွေပျံသန်း. သငျသညျအပြည့်အနှစျသိမျ့အတွက်သွားလာရ, ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနဲ့ဇိမ်ခံ. စင်းလုံးငှားဂျက်လေယာဉ်သို့မဟုတ်တစ်ဦးအချည်းနှီးသောခြေထောက်လေယာဉ်ပေါ်မှအကောင်းဆုံးစာချုပ်ယခု Call.
သငျသညျအတွက်ပျံသန်းနိုင်သည်အနီးဆုံးလေဆိပ် & ထဲက ကျောက်ချစခန်း, alaska လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်အောက်ကမြို့အနီးအနားမှာပုဂ္ဂိုလ်ရေးနင်္ဂနွေစင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်
ကျောက်ချစခန်း, Elmendorf လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းကို, ဝိန်း Fort ရစ်ချတ်ဆန်, Wasilla, လင်းယုန်မြစ်, Chugiak, အိန္ဒိယ, မျှော်လင့်ချက်, Big ရေကန်, ဟူစတန်, Girdwood, Palmer က, မိုးမခ, Tyonek, Nikiski, Cooper ကကမ်းတက်, Moose Pass ကို, Sutton, Sterling, Whittier, Kenai, Soldotna, Skwentna, Talkeetna, Seward, Kasilof, Clam Gulch, ဟိုးမား, http://www.dot.state.ak.us/anc/
ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ် Fairbanks ငှား